Iimfazwe zokuQala zeMfazwe zokuQala: Ukulwa ukuya Ekupheleni
Elinye lamaxesha amabali amakhulu emfazwe yileo majoni ajongene neentshaba ngamaxesha amaninzi ngokulwa namandla. Enye yeembonakalo zokuqala kwimbali yabantu yolwaphulo oluphambene nalo yiMfazwe yaseThermopylae apho amaGrike angama-7 000 awajongene naloo nto ngoku iqikelelwa ngabadumi beembali ukuba babe ngama-100 000 ukuya kuma-150,000 amaPersi. Olu hlobo luhlobo oluninzi lwefilimu yemfazwe, endiyibhalisile njengenye ye-archetypes yemfazwe ephakathi. Kule nqaku yeveki, ndijonge amajoni alwa nawo ekupheleni, ngokuchasene neengxaki ezinzima, ukuvavanya iingxaki zokusinda kwinqaba nganye, nokuba ingaba basinda okanye bangasinda (bahlala ipesenteji yexesha elimangalisayo!)
Iiyure ezili-13: Amagosa aMfihlelo eBanghazi
Abancinci basebenzi bee-Special Forces kunye nabasebenzi abambalwa baseMerika kwiCIA connex eBanghazi, eLibya bafumana bebodwa abakwazi ukuphendula xa iqela leCIA ligqithiswe ngamaqela angama-150 atshabalalisa aseMelika ummeli. Ngosizo olungenako ukufika kude kube ngentsasa ilandelayo, aba bantu baseMerika abancinci bafumana bezungezwe ngumbutho omkhulu otshaba olufunekayo ukubamba ukusa.
Ibanga leBakala: C
Iziphumo: 15 ukuya ku-1 (ngakumbi okanye ngaphantsi)
Ngaba Baphila? Ininzi yabo, kodwa abane baseMerika, kuquka ummeli waseMelika, bafa kunye nabanye abangama-17 baseMelika balimala.
Kulo mfanekiso we-cartoon-like-digital edalwe yeArmopylae yaseGrisi eyaziwayo, amaSpartan aseGrisi asebenzisana ne-Matrix-efana ne-kung-fu yokulwa namaPersi, njengoko elwa ukukhusela intaba encinci kwinqanaba elikhulu lempi elihlasela.
Ngama- 300 , inani lamajoni aseGrike liyancitshiswa - njengoko isihloko sichaza - 300 kunye nomkhosi wasePersi uhlonyelwe ukuba u-300,000. Oku kwenza ukuqhubeka nokulwa kunzima, njengoko ungacinga, ngenxa nje yeenombolo zamajoni asePheresiya afile alele. Kule filimu, enye yezona ziqwenga ezibonakalayo ngokubambileyo kukuba izidumbu ziqala ukubethelela ngokukhawuleza, ukuba zikhonza njengoluhlobo lwendalo okanye udonga olukhuselayo lwabantu base-Spartans baseGrike. Kutheni ufuna ukwakha iinqaba zokuzikhusela xa unokubulala nje amawaka amathandathu entshaba kwaye usebenzise izidumbu zabo ukwakha udonga?
Ukuba i-1 ukuya kwi-1 ingxaki ayilwa kumntu wokugqibela, andazi ukuba yintoni!
Ibanga leBakala: D
Iziphumo : 1 ukuya ku-1
Ngaba Baphila? Akunjalo. Xa ujongene namadoda angamawaka, awuhlali. Nangona xa ubhekene namadoda angama-1 kwizinto eziphambili kwi-cartoon.
(Funda malunga neemafilimu eziphambili zeemfazwe apha.)
Ubushushu buphela kunye nabasebenzi abahlanu be-tank Sherman ababethelele kakhulu eJamani emva kwemizila yobutshaba. Ibutho lama-300 lamabutho ase-SS lihamba ngokuya kwindawo yawo, lixhotywe ngamathambo, imichilo yemishini kunye ne-WGII ye-RPG. Iitanki zityhutyhile, kukho iingoma, oku kuthetha ukuba isiseko. Bayabaleka bonke entabeni kwaye bafihle emithini ... okanye ... banokubamba umhlaba. Akuyi kuba yi-movie xa begqiba ukugijima baze bafihleke (nangona ukugijima kunye nokufihla yinto endingayenzayo.) Ukuphela kukugonywa kwegazi kunye nokufa ... into ezalisekisa kakhulu njenge-moviegoer.
Ibanga leBakala: B +
Izibizo: Itanki kunye namadoda amahlanu ngokumelene nebhotta, elingama-300 amasosha. Ngamanye amazwi, i-60 ukuya ku-1.
Ngaba Baphila? : Kule mihlanu, omnye usinda.
(Funda malunga namafilimu aphezulu eWWII apha.)
Blackhawk Phansi , ifilimu ye-Ridley Scott iphinda ibhale ibali lobomi be-Army Rangers kwi- Battle of Mogadishu , eSomalia. Ekuqaleni umsebenzi wokuthumba umkhosi wamagosa, umsebenzi uhamba ngokungahambi kakuhle xa ii-helikopta ezimbini ezihlukeneyo ze-Blackhawk zidutshulwa ngeeRikethi. Oku kubangela ukuba i-Army Rangers ibuyele kwiindawo eziphazamisayo kwizame zokuhlangula abaqhubi. Into abayilindeleyo nangona kunjalo ukuba isixeko sonke saseMogadishu siya kuguqulwa kwindawo yabo ukulwa nabo. Bambelwe kwisixeko ukuba bawabulale, iRangers ibhekene neengxaki ezinzima njengoko zizabalazela ukusinda de kube ngentsasa, xa i-mission yokuhlangula ingazama. Elinye lamaxesha onke okugcina ama-movie, kwaye eyona nto ibhetele, ibali lokwenyaniso!
Izibizo : Kwakukho abasebenzisi be-Rangers ne-Delta Force malunga ne-Rangers ne-Delta Force kwaye uqikelelo lobungakanani bokhuselo lutshaba luyahlukahluka, kodwa abaninzi bawubeka malunga nama-4 000 ukuya kuma-6,000 (siya kukwahlula umehluko size sihambe kunye no-5,000). Ngoko-31.25 ukuya ku-1.
Ngaba Baphila? Ewe, ngenxalenye enkulu. Kwinqanaba lase-US, i-18 Army Rangers yabulawa kwaye i-73 yalimala, kodwa i-US ingqikelelo iphinda ibeke ama-1,500 ukuya kuma-3,000 amaSomalia abulawe. Lo msebenzi omangalisayo, uRangers!
(Funda malunga nefilimu ye-Ridley Scott yemfazwe apha.)
EGallipoli , uMel Gibson ngumntu wase-Australia othunyelwa kwiTurkey kwiMfazwe Yehlabathi yokuqala, engalungiselele ukulwa nemfazwe embi. Njengoko ndabuza kule nqaku malunga nokuziphatha kwimfazwe, bangaphi bethu abaya kulandela imiyalelo kunye nohlanga ngaphesheya komsele, beyazi ukuba kuya kuthetha ityala elithile? Ndingathanda ukucinga ukuba andiyi kuyenza, kodwa kunikezelwa uninzi lwabantu, ndicinga ukuba mhlawumbi ndiza kuba nayo. Kwaye oko kuthetha, ndiza kufa. Kanye njengabaqhankqalazi baseGallipoli .
Ibanga leBakala: B
Iziganeko: 1 ukuya ku-1. Ama-Australiya ekuqaleni ayengaphezulu kwamaTurks. Kodwa isicwangciso soLungelelaniso sasimpofu kwaye besesimeni esinzima, ukuzama ukuthatha ipeninsula eyayinamandla kakhulu. I-Bit by bit Australians zagqitywa zide zide zide zize zatshatyalaliswe.
Ngaba Baphila? Ao. A-Australia baxhatshazwa kakhulu kwaye bahlulwa kakubi.
Kwi- Lone Survivor , ii-SEALs eziLwandle eziMlambo zisesigxina sokubulala ithagethi ephezulu yeTaliban xa zifumaniswe kwaye intaba abahlala kuyo iqhutywe ngabagadi beentshaba.
Ibanga leBakala : A
Iziganeko: Iingxaki ezikhoyo kulo mbambano ziyahlukahluka . Ezinye iingxelo zithi ama-SEALs alwa namaqela angama-15 aseTaliban. Kwifilimu, ngu-200. Siya kuhamba nefilimu. 50 ukuya ku-1.
Ngaba Baphila? Hayi ... kakuhle, ewe. Kulungile, omnye wabo wasinda. UMarcus Luttrell, indoda eyayihlala ukuze ibhale incwadi apho yayigxininisa inani labaphambukeli awayejamelana nalo (eliyilungelo lakhe emva kokunyamezela oko wakwenzayo). Nangona kunjalo, ngelanga, abanye abathathu abahlobo bakhe bafa kwaye uLuttrell wafa ngokuphindaphindiweyo, ephila nje ngokuthanda, inhlanhla, kunye nokuba yinto eyodwa ebalulekileyo.
(Funda ngefilimu eziphezulu ze-Navy SEAL apha.)
Kule filimu ka-2004 , uBilly Bob Thornton, uDennis Quaid, kunye noJason Patrick badlala abathathu kwi-100 yokukhusela i-Texan, i-Alamo. Njengobomi bokwenene, i-fort yaxhaswa ngamajoni ama-1,500 aseMexico. Kwaye umphumo? Eyona nto yimbali yaseMerika eyenziwa nguDavy Crocket e-Alamo.
Iziphumo: 1 ukuya ku-15.
Ngaba Baphila? Cha. Akukho mntu oyedwa ohlala esinqobeni.
Ngowe-1879, uBukumkani baseBrithani obubuchwephesha obujongene nezobuchwepheshe bujongene nesizwe sakwaZulu eMzantsi Afrika, imfazwe efakwe kwiZulu , ngo-1964 ifilimu yaseBrithani malunga nokulwa kukaMichael Caine. AmaBrithani ayengumncinci omncinci kwinqanaba elincinane laseMzantsi Afrika lamadoda angama-100 ahlaselwa ngabantu abangama-4 000 abangama-Zulu. IBritani yabika ukuba ixesha elide ngaphambi kokuba babone abaqhawe, babeva ukuxhamla kweengweletshetshe zabo, ezivakala ngathi zihamba ngesitimela esondelayo. Baqhotyoshelwe kuwo onke macala, kwaye babengenayo ibharricades, zixhobo ezimbalwa, kwaye ziphantse zikhuselekile.
Iziphumo: 40 ukuya ku-1
Ngaba Baphila? Ewe! Uninzi lwazo lwa ... luyamangalisa!
(Funda malunga namafilimu e-Top African Conflict apha.)
Kwakhona, uMel Gibson ubhekene nemingcipheko yezempi, ngeli xesha kunye ne-American Army eVietnam. Sasiyintolongo esichazela ibali likaLieutenant General Hal Moore kunye namajoni akhe e-calvary ayeyalelwe ukuba ahlasele i-postpost yaseVietnam. Ngamajoni angama-400, uGeneral Moore wanyuka ephuma esibhakabhakeni kwii-helicopter. Akunjalo yena, okanye i-American military units eyayiyazi, yinto yokuba bahlaselwa yinto esekelwe kuyo yonke ibutho lamajoni aseNyakatho yaseVietnam, i-unit 4,000 eqinile. (La manani ayabonakala ehluke kuyo yonke indawo, kwinqaku le-About.com ndidibanisa kwiintlobo zamanani ahlukeneyo - ingongoma, ndicinga ukuba kukuba bekuninzi kakhulu.) Ayikwazi ukukhupha amajoni akhe ngenxa yokulwa nokulwa, u-Hal Moore kwaye amadoda akhe aphethwe ngaphaya apho angahambi khona.
Iziphumo: 10 ukuya ku-1 (ngakumbi okanye ngaphantsi)
Ngaba Baphila? Ewe! AmaMerika ahlupheke malunga nama-250, kodwa ininzi yawo (ngokumangalisayo!) Yasinda!
(Funda ngeemafilimu ezilungileyo nakakhulu kunazo zonke zaseVinnam apha.)
Iimfazwe zeMfazwe eziPhambili kunye eziMbi kakhulu ngeeNkohlakalo zoMfazwe
Izibambiso zesiLwimi zesiLatin: ILavare
Amagama, amagama kunye neziphakamiso ezisetyenziselwa ukuBhala ngokuPhezulu
Ngubani OngumGrike weGrike?
Inkcazelo yee-Quarks kwiFizikiki
Indlela yokusebenzisa iipipu ezimfutshane Iibhola zeTerethi yeTereyibhile ngempumelelo